सङ्गीत प्रवचन सम्मानित सङ्गीतकार अम्बर गुरुङको सङ्गीतवाणी - China Radio International
सङ्गीत प्रवचन सम्मानित सङ्गीतकार अम्बर गुरुङको सङ्गीतवाणी
(GMT+08:00) 2016-06-20 11:28:04
सम्मानित सङ्गीतकार, गायक र गीतकार अम्बर गुरुङसँग उनको सङ्गीत र जीवनबारे म अजय अलौकिकले वि.स. 2057 मङ्गसिर 13 गते काठमाण्डु महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित मेट्रो एफएममा कार्यक्रम "कोशेदुङ्गा"का लागि अन्तर्वार्ता लिएको थिएं। उनै महान व्यक्तित्वसँग गरेको कुराकानीका अंशहरू या भन्दा उनका सङ्गीतवाणीहरू समस्त सङ्गीतप्रेमी, अनुरागी, श्रोता, साधक, ज्ञातालाई उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेर यहाँ केही सम्पादनसहित पेश गर्न गइरहेको छु। उनका यी प्रश्नोत्तर, विचार तथा अनुभवलाई सङ्गीतसम्बन्धित् प्रवचनको रुपमा लिएको छु। जसबाट समस्त पाठक लाभान्वित हुने छ भन्ने मलाई लागेको छ।
सङ्गीत भनेको मानवजातिको सभ्यताको एउटा ठूलो प्रतीक हो। सङ्गीतले मानव ह्रदयको सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म भावलाई व्यक्त गरिदिन्छ। मानिसको पीडाहरू, खुशी, उन्माद र उमङ्गहरू जुन मानव ह्रदयले भन्न सक्दैन त्यो सङ्गीतले भन्छ। सङ्गीत मूल रुपमा सङ्गीत मात्रै हो।
(सङ्गीतज्ञ अम्बर गुरुङ)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
सङ्गीतको जन्म ध्वनीबाट भएको हो। सङ्गीतलाई ललितकला मानिन्छ। सङ्गीत पनि साहित्य, नृत्य, चित्रकला लगायतका विविध कलाहरू जसरी नै जन्म भएको हो। मनोभाव व्यक्त गर्ने तरिका हो।
सङ्गीतको खास प्रारुप लोक सङ्गीत नै हो। जुनसुकै जगहमा। पछि पाश्चात्य सङ्गीत आयो, शास्त्रीय सङ्गीत आयो जसलाई हिन्दुस्तान शास्त्रीय सङ्गीत भनियो तर त्यो ईण्डियन सबकन्टिनेट (भारतीय उपमहाद्वीप)को सङ्गीत हो। जस्तै भनौं भारत या पाकिस्तान या नेपालमा गाइने राग एउटै हो। देशले त्यसलाई विभक्त पारेको हो। वास्तवमा सङ्गीत विभक्त भएको छैन।
सङ्गीतले मानिसलाई आकर्षण गर्छ भनेर व्यापार बनायो। उत्थान कालमा नाटकमा सङ्गीत हाले त्यसपछि नै गीति नाटक बने। उता (पश्चिम)तिर ओप्रा भने। जापानी या चिनियाँ लोक आधारित गीति नाटक भिन्न छ। यसरी विभक्त हुँदै नानाथरीका नाम दिए। पछि फिल्ममा सङ्गीत राखे। पछि नितान्त व्यापार भयो।
सङ्गीत भनेको गीत गाउनु मात्र हुँदैन। अहिलेको जेनेरेशनले बिर्सेको जस्तो लाग्छ। सङ्गीतको अरु रुप पनि छन्। जस्तो फिल्ममा पार्श्वसङ्गीत। विभिन्न उपभोग्य बस्तुमा पनि सङ्गीतको प्रयोग भयो विज्ञापन सङ्गीतको रुपमा।
सङ्गीतको भूमिका चानचुने छैन। हाम्रो देश सानो भए पनि यति धेरै विभिन्न सँस्कृतिहरू छन्। हामीकहाँ सङ्गीत व्यापक छ। हामीले नेपाली जगत्‌मा सङ्गीतलाई साङ्गीतिक सँस्कृति भने हुन्छ। त्यस हिसाबले सङ्गीत कला भने मर्यादित हुनुपर्छ।
सङ्गीतको अवस्था - वर्तमान
यो हाल बाल्यावस्थाबाट अलकिति अगाडि बढ्दै यौवनकालमा चढिरहेको छ। त्यसकारण गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। अहिलेको संसारमा चुनौती धेरै छन्। सबै कुरा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हुन्छन्। नेपालीले पनि यो चुनौतीको सामना गर्न परेको छ। विश्वमा सङ्गीत पूर्ण व्यवसायिक भएको छ। भनिन्छ सङ्गीतको एकदम व्यापार पनि हुन्छ। तर हाम्रो सङ्गीत फस्टाउन सकेको छैन। हामीलाई आइडेन्टिकल (एक समान) सङ्गीत दिन गाह्रो परेको छ। हाम्रो साँस्कृतिक सँस्कृति अहिले विभिन्न रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गीतबाट अतिक्रमण भइरहेको छ। भारतीय फिल्मबाट पनि अतिक्रमण भइरहेको छ। यता तिर हाम्रो लोक सङ्गीत छ, शास्त्रीय सङ्गीत छ, सिर्जनात्मक सङ्गीत पनि छ। त्यसले गर्दा यो क्षेत्र विशाल छ। प्रोत्साहन भने पाएको छैन। किनकी कलाकारले पनि जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ। कि पूर्ण रुपमा व्यवसायिक बनाउनु पर्छ यता सरकार त्यति उद्यत देखिन्न। त्यसले गर्दा यहाँ सङ्गीतको विकास हुनसकेको छैन। सङ्गीत अहिले अफ्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रदैंछ। अहिले सङ्गीत दोधारमा परेको छ। भनेजस्तो सङ्गीतको पाठशाला पनि छैन। भएका केही पनि कमर्स्यल छन्। शिक्षागत रुपमा सङ्गीतको विकास एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। जनसाधारणका लागि मनोरञ्जनको माध्यम बनेको छ। सङ्गीत एउटा कला हो, शैक्षिक विधा हो यसमा टेक्नोलोजी हुन्छ यस्ता कुरा हामीले बुझ्नसकेका छैनौं। केहीले मात्र जानेका छन्।
सङ्गीतको अवस्था - त्यस बेला -- हालको व्यवसायिक्ता र प्रविधी
त्यस बेला रेडियो नेपाल मात्र एउटा माध्यम थियो। त्यसले अग्रिम भुमिका खेले पनि मोनोपोली (एकाधिकार) थियो जसकारण सबै कलाकारले प्रश्रय पाएनन्। हाल एफएम, स्टूडियोहरू प्रशस्तै खोल्यो त्यो राम्रो कुरा हो। उदाहरणका लागि मैले प्रथम पटक रेकर्ड गर्दा कलकत्ता जानुपर्यो किनकी हामीसँग यता स्टुडियो थिएन। अहिले आफ्नो खुशीले आफ्नो समयनुसार रेकर्ड गर्नसक्छौं। रेकर्डिङ्ग प्रविधिहरू धेरै छन् पहिले एउटै माइकमा सोह्र-सत्र जना म्यूजिसियन हुन्थ्यो। यति ठूलो परिवर्तनमा पनि एकाध मात्र फाटफुट रुपमा मात्र राम्रा नेपाली गीतकार, सङ्गीतकार र गायक देखिएको छ। यो ठूलो बिडम्बना हो।
पहिले यो साधना तपस्याको रुपमा लिन्थे तर अहिले व्यापार भएको छ। यसबाट व्यापकता भएको छ तर आत्मालाई छुने सङ्गीत कतिको छ त। आज मीठो गीत सुनाउँछु भन्छ कार्यक्रम प्रस्तोताले तर मीठो गीत त्यस्तो हुन्छ भने नमीठो गीत कस्तो हुन्छ त। त्यसकारण प्रस्तोताले पनि यसबारेमा विचार गर्नुपर्छ। एउटा सफल गीत हुनका लागि एउटा राम्रो गीतकार, एउटा राम्रो सङ्गीतकार, एउटा राम्रो गायक यो त्रिवेणीको सङ्गमले राम्रो सिर्जना जन्मन्छ भन्थ्यो। तर अहिले श्रोता पनि राम्रो चाहिन्छ त्यसै गरी उद्घोषकमा पनि राम्रो गीत छनौट गर्ने क्षमता हुनुपर्छ।
सङ्गीत सबै क्षेत्रमा पहिले पूर्वार्धमा एउटै हो। पौराणिक सङ्गीत त्यस्तै थियो। हाम्रो देशका विभिन्न भागमा पनि लोक नृत्य नाच सङ्गीत छ। त्यो हाम्रो पुर्खाको देन हो। लोक नाच भनेको हाम्रो पूर्वजहरूले हामीलाई दिएको हो। त्यसैबाट हाल विकसित भएको हो। अब हामीले नयाँ सन्ततीलाई के दिने त। हामीले सिर्जनात्मक सङ्गीत दिनुपर्छ। यसमा ज्यादातर संवेदनशीलता, सौन्दर्यबोध, मानवीय भावना हुन्छ तर अहिले बजारमा चल्ने गीतमा त्यस्तो छैन र चिन्तनमननको गुञ्जाइश नै हुँदैन। यस्तो सोचविचार गर्ने श्रोता कम छ, न्यून छ भने पनि हुन्छ। यसबाट कुन चाहीँ राम्रो सङ्गीत भनेर छुट्टाउन सक्दैनन्। बजारमा केही सामान किन्दा पनि अप्सन (विकल्प) पाइन्छ तर सङ्गीतमा त्यस्तो छैन यहाँ। आधुनिक सङ्गीत एक मिश्रित सङ्गीत हो त्यसको आफ्नै मूल छैन। तर सिर्जनात्मक सङ्गीत बनाउन गाह्रै छ।
सङ्गीतमा सितारवादन या पियानो वादन भएमा त्यसमा धून मात्र हुन्छ विशुद्ध सङ्गीत मात्र हुन्छ। त्यसको राम्रो या नराम्रो भन्नलाई सुन्ने श्रोता अलि विज्ञ नै हुनुपर्छ। तर भाषाले मात्र पनि नेपाली सङ्गीत हुँदैन। देउराली शब्द हुँदैमा नेपाली गीत हुँदैन र मादल बजाउँदैमा पनि नेपाली गीत हुँदैन। राहुल देव बर्मनले पनि आफ्नो गीतमा मादल बजाए तर त्यो नेपाली गीत हो त। गीत लेखनमा साहित्य पनि हुन्छ र सङ्गीत पनि हुन्छ। मैले गीत लेखेको किताब छाप्न भनेर होइन छापिनु नछापिनु पछिको कुरा हो। मेरो मूल उद्देश्य भनेको सङ्गीत बनेपछि गाउन तथा भर्न लेखेको हो। गीतमा पनि त्यति सौन्दर्य होस्, संवेदनशीलता होस् र सङ्गीतकार अनि गायक र श्रोताले पनि मनन गरोस्। नभए आजको द्रूत वातावरणमा राम्रो सङ्गीतले ध्यान पाउन मुश्किल नै छ।
कर्डमा कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्छु र शब्द संयोजनमा पनि कहिलकाहीँ यता-उता पनि गर्छु। यो एकोहोरो विधा हो। यो पनि जब(काम) नै हो। यो कुनै दशदेखि पाँचको काम भने होइन। म अलि संवेदनशील र भावुक छु स्वभावले।
(अम्बर गुरुङले क्वोएर पनि गरेका छन् जुन यसअघि र आजको दिनसम्म अरु कुनै नेपाली सङ्गीतकारले गरेको छैन।)
फिल्मको गीतलाई अक्जिलरी (गौण) सङ्गीत भनिन्छ किनभने त्यो सङ्गीतकारको स्पोट्यानश (स्वाभाविक) सङ्गीत होइन त्यो बस्तुस्थितीको माँग अनुसार हुन्छ। फिल्ममा मेरो इच्छाको सङ्गीत हुँदैन। त्यो निर्माता, निर्देशक र कथाबस्तुले माँगेको जस्तो हुनुपर्छ। त्यस हिसाबले म बम्बे गएर बसेको भए पनि म खुशी हुन्थिन। त्यस्तो चान्स नआएको पनि होइन। अहिले भन्दा बढी नाम र प्रशस्त पैसा कमाएको भएता पनि मन भित्र आत्माबाट सन्तुष्ट हुने थिएन। किन भने मेरो सङ्गीतको दृष्टिकोण साह्रै मानविय छ। ज्यादै संवेदनशील छ।
क्रिम अफ लाइफ –सङ्गीतमा समर्पित
मैले जीवनमा केही आर्जन गर्नसकेको छैन। अरु विधा जस्तै टेक्नोलोजीमा एकदम कमजोर नै छु। तर सङ्गीतमा बाल्यवस्थादेखिनै रुचि थियो। त्यो बेला म यस्तो हुन्छु भनेर गीत गाएको पनि होइन। त्यो सौखनै अहिले बढ्दै-बढ्दै यस स्थितीमा आइपुगेको हो। मेरो नौ लाख तारा गीत तयार भइसकेपछि पनि म रेकर्ड गर्छु, रेडियोमा गाउँछु भनेर सोचेको थिइन। विश्वास गर्नु होला। (उनले सन् 1961मा नौलाख तारा नामक गीत रेकर्ड गराएका थिए।) रेकर्डपछि जुन व्यापकता पायो त्यसले मलाई चिनायो। आजसम्म पनि त्यो गीतको फर्माइस आउँछ। जब श्रोताले प्रेम देखाएको मनपराउन थालेपछि म अब यसमा गम्भिर हुनुपर्छ भन्ने भयो। यात्रा कठिन थियो। साधनाका लागि प्रशस्त समय चाहिन्थ्यो। जीवन निर्वाह गर्नैपर्‌यो। त्यसो गर्दै दुःख सुख सामना गर्दै अगाडि बढ्दै गएं र अहिले यस्तो स्थितीमा आइपुगें कि मेरा श्रोताले मलाई उत्तरदायित्व दिएको छ भन्ने भयो र नेपाली सङ्गीतलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने भयो। कुनै कम्पलसन (बाध्यता) छैन तर मोरल ओब्लिगेसन (नैतिक दायित्व) मानुं। खाली रचना र सङ्गीत मात्र गरेर हुँदैन। व्यापकता पाउनुपर्छ। यसलाई श्रोताले बुझ्नुपर्छ, कलाकारले बजाएर, गाएर जीवनयापन गर्नसक्नु पर्छ। मैले मेरो क्रिम अफ लाइफ नै दिइसकेको छु। अब बाकी लाइफ किन नदिने त। अब मैले फर्कने अवस्था पनि छैन। कुनै नयाँ व्यवसाय अपनाउन सक्दिन। यो उमेरमा कुनै विधा अपनाउन पनि सक्दिन र व्यापार व्यवसायका लागि पुँजी पनि छैन। गाउन सक्दिन भने किताब लेखुँला। सङ्गीतबारेमा लेक्चर, व्याख्या गरुँला। मान्छेहरूले सङ्गीत बुझेको छैन भनेर चित्त दुख्छ तर एक मनले भन्छ उनीहरूको के दोष त। उनीहरूलाई बुझाउन माध्यम तथा साधन चाहिन्छ। उनीहरूले नबुझ्नु उनीहरूको गल्ती होइन। सङ्गीत बारेमा संस्था खोलिनुपर्छ, सङ्गीत बारेमा तर्कवितर्क हुनुपर्छ, सङ्गीतको वर्कसप हुनुपर्छ, प्रवचन हुनुपर्छ, सम्मेलन हुनुपर्छ। म क्यासेट विमोचनमा किन जान्छु भन्दा यही नै हो। म त्यहाँ गएर सङ्गीतका बारेमा एक दुई वटा कुरा भन्छु जुन त्यहाँ आएका केही पाँच-छ जना मान्छेले मात्र बुझे पनि त्यो ठूलै कुरा हो। अब म आफैले सङ्गीतबारे बोल्नलाई हल तथा उपकरण जोड्न मुश्किल नै छ।
सङ्गीत जन्मसिद्ध प्रतिभा कि अध्ययन
कतिपय यस्ता कलाकार, साहित्यकारहरू जन्मेका छन् जसले ईश्वरको अस्तित्वप्रति विश्वास गरेका छैनन्। त्यस्तै कतिपय सन्तजस्तै ईश्वरप्रति समर्पित रहेका छन्। सङ्गीत मानव जातिका लागि सर्वश्रेष्ठ उपहार हो। सङ्गीत यति सुन्दर छ यसमा संवेदना, सौन्दर्य, भावनाको खानी छ जुन कहिले पनि यसको पूर्ति हुनसक्दैन। हामी कसरी सक्षम हुनसक्छौं जस्तो हीरालाई पनि पगाल्न पर्यो के-के गरेपछि त्यसको पक्का स्वरुप निस्कन्छ त्यस्तै सुन पनि जति खार्‌यो त्यति राम्रो भन्छ नि प्रतिभा पनि त्यस्तै हो। हरेक ज्ञान सबै अगम छ यी सबैमा लगनशील भएर निरन्तरता दिनुपर्छ। मान्छेसँग प्रतिभा सँगसँगै लगनशिलता पनि हुनुपर्छ। प्रतिभा एउटा यस्तो फूल हो जसमा मलजल पुगेन, पानी पुगेन, घाम परेन भने मुर्झाउँछ। त्यो पनि झर्छ। यो छोटो जीवनमा सङ्गीतलाई साधना र पूजाको रुपमा लिए केही होला नभए दुई चार वटा गीत प्रसिद्ध हुँदैमा स्थायित्व कायम गर्छ भन्ने छैन।
सङ्गीतमा मलाई यस्तो भयो कि केही वर्ष अघि निकै जाने जस्तो लाग्यो तर अहिले त कहाँ कहाँ हराए जस्तो। जस्तो बल्लतल्ल एउटा डाँडा काट्यो त्सपछि फेरि अर्को अग्लो डाँडा देखिन्छ। त्यस्तै हो। आफू जहाँसम्म जानसक्छ त्यहाँसम्म जानपर्‌यो। एउटा ईमानदारिता चाहिन्छ।
जसले प्रेम बुझेको छैन। जसले माया दया जानेको छैन। जसले सौन्दर्य बुझ्दैन बसन्त आयो कि वर्षा आयो थाहा हुँदैन भने त्यस्तोले गरेको सङ्गीत के सङ्गीत।
नयाँ पुस्ता र हस्तान्तरण
मैले पहिला एउटा क्रिएटिभ म्यूजिक स्कुल भनेर खोलेको पनि थिएं। तर त्यो चलेन। अनि मेरो यो लामो यात्रामा धेरै जनालाई सङ्गीत पनि सिकाएं। मैले नेपालीमा सङ्गीत सिक्ने धैर्य कम देखें। मैले किन नेपाली भनेको भने म सानोमा भागी-भागी विभिन्न जातका मानिससँग विशेषत बङ्गालीहरूसँग सङ्गत गर्थे। उनीहरू एकदम कमिटमेन्ट (प्रतिबद्ध) थिए। एङ्गलो ईण्डियनहरू त्यस्तै थिए। उनीहरूले सङ्गीतका लागि छुट्टै परिवेश बनाएका थिए। यहाँ कसैले सिरियस लिँदैनन्। एउटा दुईटा राग सिक्यो एउटा गीत गरुं छिटो गरुं छिटो खाउँ भन्ने छ। यो रोगले ग्रस्त छन्। एउटा गीतै लेखेर जीवनयापन गर्न पनि मुश्किल छ। त्यसबाहेक पनि केही गीतकार, सङ्गीतकर्मीहरू समर्पित पनि छन्। तर यो आजको दौड हो कि चुनौती हो कि के हो त्यस्तो सिरियसनेस पाउँदिन्। मेरो विद्यार्थीमा पनि पाँच प्रतिशत जति होला कि भन्छु।
म चाहन्छु सङ्गीतले व्यापकता पाओस्। प्रचार होस्। अहिलेको पुस्ताले हामीले जस्तो ह्यूमिलेसन (अपमान) खप्न नपरोस्। सङ्गीत गर्ने मान्छेसँग सङ्गत गर्न दिँदैनथ्यो पहिला। मेरो घरमा पनि त्यस्तै थियो। सङ्गीत सिक्यो भने मान्छे बरालिन्छ भन्ने खालको धारणा थियो। सङ्गीतमा लाग्नेलाई आमाबाबु छोरी दिन पनि तयार हुँदैनथ्यो। किनभने उनीहरूले पाल्नसक्दैन भन्ने थियो। तर त्यो धारणा हाल मेटिएको छ। केही मात्रामा भने मेटिएको छ। अझै पनि हामी रुढीवादले ग्रस्त छौं।
अहिलेको पिढीमा राम्रो स्वर, शब्द अनि सङ्गीत पनि सुन्छु। तर यो साधनाको कुरा हो। मैले मेरो शिष्य चेलाहरूलाई सम्झाउने गर्छु। बीस वटा नराम्रो गीत गाउनु छ या बीस वटा गीत नराम्रो लेख्नुछ भने दुईटा राम्रो गीत लेख। यसो भयो भने जस पाउँछ। किनभने पाँच वटा राम्रो गाउने अनि दश वटा नराम्रो गायो भने मान्छेको मन त्यो दश वटा गीत तर्फ जान्छ। त्यो राम्रो गीतले जस पाउँदैन। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता सङ्गीत शिक्षण स्कुल संस्थाको अभाव भएर पनि युवा पिढी अलमलिएका होलान्। बाटो बिराएका होलान्।
साहित्य पढ्ने युवा वर्ग एकदमै कम छ। चिन्तन गर्ने विषयतर्फ लाग्ने निकै कम छ। साहित्य पढ्नुपर्छ। क्यासेट बजाउँदा त्यसमा जे जे गीत छ त्यो मात्र बज्छ। त्यो भन्दा बाहिरको बज्दैन। त्यस्तै आफूभित्र जे अनुभव छ जे ज्ञान छ त्योभन्दा बाहिरको बताउन सक्दैन। त्यसकारण कला भन्दा पनि जीवन ठूलो छ। जीवन विराट अनि विशाल छ। जीवनले नै कला सिकाउँछ। जीवन छ त धर्म छ। जीवन नभए के ईश्वर छ। यसरी सङ्गीतको सैद्धन्तिक ज्ञान र साधनामा अटलता, धैर्य, सङ्कल्प गर्‌यो भने बन्नसक्छ ठूलो सङ्गीतकार ।
एउटा ठूलो कन्डक्टरले भनेको छ कि प्रसिद्ध हुनु र महान हुनुमा फरक छ। प्रसिद्ध जो कोही हुनसक्छ। महान हुन बहुत गाह्रो छ। प्रसिद्ध मान्छे महान नहुन पनि सक्छ।
हामीहरू रात परेपछि मात्र हतारिने स्वभावका छौं। अनि कसैको देहावसान भएपछि जयजयकार गर्ने गर्छौं। त्यही हामी भित्रको मैले पनि सङ्गीतकै एक नक्षत्र अम्बर गुरुङसँगको यी अन्तरङ्ग वार्तालाई यस अघि कहिले प्रकाशमा ल्याइन। हुन त मेरो कार्यक्रममा निम्त्याएका श्रष्टाहरूसँगको कुराकानी र अनुभवलाई सङ्गालेर 'कोशेढुङ्गा' शीर्षकमा नै पुस्तकाकार दिने योजना थियो पनि। तर अहिले उनै सम्मानित सङ्गीतकार, गायक, गीतकार, चित्रकार र लेखक बहुप्रतिभाशाली अम्बर गुरुङसँगको कुराकानीका अंशहरू केही सम्पादनसहित सङ्गीतसम्बन्धित् प्रवचनको रुपमा यहाँ पेश गरें। यो सङ्गीतका नक्षत्रप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलिस्वरुप मेरो तर्फबाट। चीर शान्तिको कामना गर्दछु।
उनीसँग कार्यक्रम कोशेढुङ्गाको अन्तर्वार्तामा सशरीर भेट हुनुअघि उनका सिर्जनामार्फत मात्र मैले उनलाई भेटेको थिएं। त्यस पछि उनको निवासमा एक पटक र क्यासेट विमोचनलगायतका कार्यक्रममा पटक-पटक नमन गर्ने र केही वार्तालाप गर्ने अवसर मिलेको थियो। पछि आएर सन् 2010मा पैचिङ्गमा भेट्ने अवसर मिलेको थियो। सन् 2010को पैचिङ्गको गृष्ममा सम्मानित सङ्गीतकार अम्बर गुरुङले आफ्नो साङ्गीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। विशेषत उनको प्रस्तुती चिनियाँ श्रोता तथा दर्शकतर्फ लक्षित थियो। राष्ट्रिय गान र सैनिक गानका सङ्गीत निर्माता अम्बर गुरुङको जन्म वि.स. 1994 साल फागुन 14 गते भारतको दार्जीलिङमा भएको थियो र काठमाण्डुमा उपचारका क्रममा वि.स. 2072 जेठ 25 गते मंगलबार 79 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो।
आफ्नो जीवन नै सङ्गीतलाई समर्पण गरेका उनी आफैमा एक सङ्गीत विरासत हुन्। यस अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र साथै भावी पुस्तालाई उनका अधूरा साङ्गीतिक इच्छा पूरा गर्न र नेपाली सङ्गीतलाई थप उचाइ दिनसकोस् भन्ने कामना गर्दछु जुन साँचो अर्थमा हामी सबैको उनीप्रति सम्मान हुनेछ।
(सङ्गीतज्ञ अम्बर गुरुङका साथमा तत्कालिन राजदूत टंकप्रसाद कार्की, पङ्क्तिकार अजय अलौकिक र चिनियाँ सहकर्मी समुद्र र सँध्या)